ရန်ကုန် ~ ပုဂံ ( Tour Package ) - BaganMart
Yangon-Mandalay-Amarapura-Mingun-Ava-Sagaing-PyinOoLwin-Bagan-Heho–Kalaw-Loikaw-PheKhune-Sagar-Tar Khaung-Heho-Yangon 15 Days &14 Nights Itinerary ခရီးစဉ်
ကွညျ့ရှု့သူ အရအေတှကျ : 697 view counts
Brand : Kyaw Moe Win
Model : ရန်ကုန် ~ ပုဂံ
လုပျငနျးအမညျ : Kyaw Moe Win Travel & Tours Co., Ltd Unverified Member
ဖုနျးနံပါတျ : 01-657 601, 09-731 64432, 515 2650, 509 9024
အသုံးပြုသောနေရာ : ခရီးသွား ဝန်ဆောင်မှု့ လုပ်ငန်း
Material : Travel services
Type : Travel Services
မြန်မာနိင်ငံအတွင်းရှိ ရှေးဟောင်း သမိုင်း ယဉ်ကျေး မှု့အမွေအနှစ်များ ဖြင့်ပြည့်နေသောပုဂံ သည် ကမ္ဘာ့ လှည့် ခရီးသည်များအတွက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တစ်ခုတည်းသော ခရီးသွား များအတွက် ဆွဲ ဆောင်မှု့ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပုဂံတွင် မူ လက ဘုရားကျောင်းကြီး ၁၀၀၀၀ကျော် တည်ရှိပြီး ၁၁ရာစု နှင့် ၁၃ ရာစု ကြားတွင် အုတ်ဖြင့်ဆောက် လုပ်ထားသည့် ရှည်လျားသော ဆောက်လုပ်မှု့ ကြီး တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ၇ရာစု ပြီးနောက်ပိုင်း ၂၂၁၇ နှစ်အထိ တည်ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ ဆယ်ပါးကြီးမြတ် ပုဂံ သည် ခရီးသွားများ အတွက် ဆွဲဆောင်မှု့ အရှိဆုံး အထိမ်းမှတ် တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ အာနန္ဒာ ဘုရားကို ၁၀၉၁ ခုနှစ်တွင် ဘုရင် ကျန်စစ်သားက တည်ထားခဲ့ပါသည်။ သဗ္ဗေညု ဘုရားသည် ပုဂံတွေ အရှည်ဆုံး အ ဆောက်အဦး ဖြစ်ပြီး ၆၂ မီတာ ရှည်ပါသည်။ ၁၂ ရာစု တွင် တည်ဆောက်၊ တည်ထား ခဲ့ပါသည်။ ဒါ့ပြင် ရွှေဂူ ကြီး ဘုရား ကို အလောင်းစည်သူမင်း က ၁၃၃၁ ခုနှစ်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ အထိမ်း အမှတ် အဆောက်အအုံနှင့် မတူအောင် တည်ထားခဲ့ပါသည်။ ဓမ္မရံ ကြီးဘုရားသည် မြို့ ရိုး၏ တစ်ကီလိုမီတာ ကျော် ဖြစ်ပြီး မြို့ ရိုး၏ အနောက်တောင်ဘက် တွင်တည်ရှိပါသည်။ ရွှေဆံတော် ဘုရားကို အနော်ရထာ မင်းကြီးက ခုနှစ် ၁၀၅၇ တွင် တည်ထားခဲ့ပါသည်။ ရှည်လျားပြီး ပြား ချပ်ချပ် အဆောက်အအုံ ဖြစ်ပြီး ရှင်ပင်သာလျောင်း ဗုဒ္ဓလျောင်း ပါရှိပါသည်။ နောက်ဆုံး မြန်မာ ပုံစံဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့သည့် ပုဂံ ဘုရားတစ်ဆူ မှာ ထီလိုမင်းလို ဘုရားပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါပြင့် နောက်ဆုံး တည်ထားခဲ့သော အကြီး ဆုံး စေတီ
တော်မှာ ခုနှစ် ၁၂၁၁ ခုနှစ်တွင် ဆောက်လုပ်ခဲ့သည့် မင်္ဂလာစေတီ တော်ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းကို ၁၂၈၄ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗိသုကာပညာ၏ အထွတ်အထိပ်ကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ ပုဂံရှိ အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းသောနေရာများမှာ ညောင်ဦး မြို့ ရှိ ရွှေစည်းခုံ နှင့် ညောင်ဦးဈေး၊ နှင့် မြင်းကမ္ဘာ ရွာသည် ကျော်ကြားသော ပုဂံ မြို့ သစ် ဖြစ်ပါသည်။
Our Services Marketing are be Fast, Flexible and Friendly. Our Customer Satisfaction is developed by customers' comparing their expectations to our perceptions of the actual services delivery process.
We look at what the product really provides to customers, understanding the product and the steps required to obtain the product often leads to ideas that assist the firm in differentiating itself.
For ရန်ကုန် ~ ပုဂံ ( Tour Package )
May I get the quotation for " ရန်ကုန် ~ ပုဂံ ( Tour Package )" ?